မင်္ဂလာပါရှင်~~~ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများအားလုံး ကျန်းမာပျော်ရွှင် အဆင်ပြေကြပါစေရှင်~~~
ဘဝဆိုတာ... အမောတစ်ခု... အတိတ်ဆိုတာ... အရိပ်တစ်ခု... စိတ်ဆိုတာ... ပိတ်ကားတစ်ခု...
ရုပ်ရှင် နှင့် စာအုပ်စင်
Posted by k2tmaung comments (0)
ငါဟာ အမြဲ မှန်ချင်ခဲ့သူသာ...
ငါ လုပ်ခဲ့သမျှ အမှားတွေ မဟုတ်ခဲ့...
အမှားတွေကသာ ငါ့ကို ခလုတ်တိုက်ခဲ့တာ...
ငါ အပြစ်ဖြစ်လောက်တဲ့ အစစ်အမှန်တရား...
ငါ ဘာများ မှားယွင်းခဲ့သလဲ...
ဖတ်ဖို့ စိတ်ရှုပ်မှာ ငါဘာများ တတ်နိုင်မှာလဲ...
အသပ်ရပ်ဆုံး ရေးခဲ့တဲ့ ငါ့လက်ရေး...
တည့်တည့် နဲ့ မှန်မှန်...
Created By: k2tmaung (23 January 2017 Monday 00:18PM)
ငါ စွမ်းသမျှ စုဆောင်း...
Created By: k2tmaung (22 January 2017 Sunday 22:50PM))
မယုံကြည်ခြင်း နဲ့ အထင်သေးခြင်း
ကိုယ်ဆိုတာ အဲ့လို တကိုယ်ကောင်းစိတ်နဲ့
ကိုယ်ဆိုတာ အဲ့လို ကိုယ့်ကတိကိုယ်
အနာဂတ်ထဲ ငါ့အမှားတွေ ထုတ်ဖို့
ငါ နဲ့ ငါကို ခွဲခြားဖို့
ငါ ကွေ့ထွက်ခဲ့တဲ့ လမ်းခွဲမှာ
ငါသာ သိတဲ့ အကွဲအပြဲ
ငါ အမြဲ အမှတ်ရနေပါတယ်
Created By: k2tmaung (09 January 2017 Monday 12:20PM)
ကိုယ့်အတွက် မမြဲခဲ့တဲ့ ကြိုး
မေးရက်တယ်... အစွန်းတစ်ဖက် မလွှတ်ရက်လေသလားတဲ့
တသက်လုံး အပျက်ပျက် ဖြတ်လို့ရပါ့
ဘယ်တော့မှ ငါသည် ပြန်မကမ်းစေရ...။
Created By: k2tmaung (07 January 2017 Saturday 06:22PM)
ရုတ်တရက် ဖတ်မိ ကျိန်စာသင့်၏
အဲ့ဒီမျက်လုံး အဲ့ဒီအပြုံးနဲ့ အဲ့ဒီစကားလုံး
စုန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ အရှုံး အမုန်းသင့်စေ
နားထဲမှာ မျက်စိထဲမှာ ခေါင်းထဲမှာ
ပြုစားခံရတာဆို သူ့ကို အိပ်မက်ထဲမှာ မြင်ဖူးလေရဲ့
ထိထားတဲ့ စာအုပ်ပေါ်က လက်
ဘဝထဲ ကမောက်ကမ မှောက်ကျ
ရင်ဘတ် နဲ့ရင်းပြီး ရေးတဲ့
နှလုံးသွေးနဲ့ မကင်းတဲ့ ဒဏ်ရာ
ထိမရ ပွေ့မရ နမ်းရှိုက်မရ
Created By: k2tmaung (16 September 2016 Friday 07:28PM)
ငါ နဲ့ ငါ
တွေးနေတိုင်းလည်း အမေးတွေ အဖြေမရဘူး
အချော့အမော့ကြိုက်တဲ့ အထာကျကျ ဇာတ်ဆရာ
အချယ်အသမကင်းတဲ့ အရေခြုံ မယုံရတဲ့အလွှာ
ဘဝဆိုတာ ရတာမလို လိုတာမရ
စလုံးရေစကတည်းက အကျပ်အတည်းနဲ့ စည်းချခံရ
နာကျည်းခြင်း နဲ့ နာကျင်ခြင်းကို ခွဲခြားနိုင်တဲ့အခါ
ခံနိုင်ရည်အားနဲ့ ဘဝကို ဖတ်ရှုတတ်လာတာလား
ဖြစ်ပျက်တိုင်းသာ စာတစ်အုပ်လို အတိုချုပ်ရရင်
ရသစုံနဲ့ ထုံမွှန်းမယ့် အစွန်းကင်းတဲ့ အရှုပ်တော်ပုံ...
ပြန်ဖျက်မရတဲ့ မှင်နီရာနဲ့ ခဲခြစ်ရာ
စုံးစုံးမြုပ်အောင် ငါ့ကိုယ်ငါ နှစ်ခဲ့တယ်
အကျည်းတန်ခြင်းအတွက် မျက်နှာဖုံးတစ်ခု မဖန်တီးခဲ့ဘူး
ဖိနှိပ်ခြင်းတွေ အမျိုးမျိုးတိုးတဲ့ စမ်းသပ်မှုတိုင်းမှာ
ငါ ပျိုးခဲ့တာက 'သတ္တိ' တစ်ခုတည်းရယ်...
အရှုံးတွေကြား အပြုံးမသုံးဘဲ အချိန်မဖြုန်းခဲ့သူမို့
အမုန်းတွေကြား ချုံးချုံးမချဘဲ ရုန်းထွက်နိုင်ခဲ့သူမို့
ငါ နဲ့ ငါသာ တိုက်ရတဲ့ ပွဲ
ငါ နဲ့ ငါသာ လွန်ဆွဲ
ငါ နဲ့ ငါသာ နွှဲရင်း
ငါ နဲ့ ငါသာ.......
ငါ့လမ်း ငါ မှန်းပြီးရင်တော့
နောက်ပြန်လှည့်ခြင်း အလျဉ်း ကင်းလေရဲ့...
Created By: k2tmaung (05 August 2016 Friday 11:52AM)
အို ကြွေပါလေတော့ ကြယ်လေးရယ်တဲ့...
အတိတ်မှာ အရိပ်တွေ စွေစောင်း
ခပ်ရေးရေး အနာဂတ်ကို တွယ်ဖက်
အတ္တနဲ့ အပွန်းအပဲ့ခံ တွဲခဲ့တဲ့ အဲ့ဒီလက်
ရောင်မပြန်တဲ့ မေတ္တာ နဲ့ စေတနာ
ခွင့်လွှတ်တတ်တဲ့ အကြင်နာ နဲ့ ဂရုဏာ
အနာဂတ်မှာ အရိပ်တွေ ခြေချုပ်
ခခယယ စကားလေးတစ်ခွန်း ဆိုပါရစေ
Created By: k2tmaung (31 August 2015 Monday 02:05PM)
SPICA ရဲ့ Ghost, CNBLUE ရဲ့ I'm Sorry နှင့် ထိရှမိသော အတွေးများ
ကိုယ့်ကိုယ်မှာ အဖြူစစ်စစ်တွေ ရှာမတွေ့မှ
အမှားတွေ ခိုးစားထားခဲ့တဲ့ ည
ပစ္စုပ္ပန်မှာ ဘယ်ဆေးနဲ့ သွေးတိတ်ရပါ့
လက်တည့်သူပစ်တိုင်း တဆစ်ဆစ် နာဆဲ
ကံကိုယုံ ဆူးပုံနင်းခဲ့တာ မှန်ပေမယ့်
ကိုယ့်အပြစ်ကိုယ်ပိုက် ငါ မိုက်ခဲ့တယ်လို့
ခေါင်းငုံ့မျက်နှာချ မာနတွေ မြေခဖို့
ဘယ်သူ့မှ ထိရှခဲ့တာ မရှိဘူးလေ
အပြစ်ကင်းသူအတွက် အပြစ်မကင်း ဖြစ်စေတဲ့ အား
ငါ့အတွက်တော့ တသက်တာ ခါးနေမယ့် ဓား
သူ့ခြေလှမ်းတွေကို တားမယ့် တံခါး
Created By: k2tmaung (09 March 2015 Monday 12:45PM)
အမှားမကင်းတဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြောပြောနေဖြစ်တဲ့စကား... လူတိုင်းအမှားမကင်းပါဘူး... အမှားတစ်ခုကို ထပ်ခါထပ်ခါ မကျူးလွန်ဖို့ပဲလိုပါတယ်...
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ချစ်တတ်သူပီပီ အမှားတွေကို လွယ်လွယ်မေ့ပစ်တတ်ပေမယ့် အိပ်မက်ထဲ အကြိမ်ကြိမ် ခြောက်လှန့်နေပြီဆို သေချာတယ် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ခွင့်လွှတ်လို့ မရသေးတဲ့ နောင်တတွေ ဟိုးအတွင်းကျကျ တစ်နေရာမှာ သိမ်းဆည်းထားနေတုန်းပဲ...
အာ... ဘဝတထောက်မှာ တွေ့ခဲ့တဲ့ နာကျင်စေတဲ့သူတွေလား... မှတ်ထားလေ့မရှိပါဘူး... ကိုယ့်နောင်တနဲ့ကိုယ် ပူလောင်ကောင်းပူလောင်နေပါလိမ့်မယ်... ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီအမှိုက်တွေ ရင်ထဲထည့် အမုန်းတွေနဲ့ မီးရှို့တတ်တဲ့ လူမဟုတ်ဘူးလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ထင်တာပဲ... အဓိကက သူများအမှားထက် ကိုယ့်ညံ့ကိုယ်ခံရတာကိုပဲ သင်ခန်းစာယူဖို့ စဉ်းစားတယ်... :)
ဒီblogလေးကို လုပ်ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းကတော့ စိတ်ကူးပေါက်ရာ ရေးထားခဲ့တာလေးတွေကို တစ်စုတစ်ဝေးတည်းရှိနေစေချင်တဲ့ ဆန္ဒလေးတစ်ခုနဲ့ပါ...
တစ်ခြားသူတွေအတွက် အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမယ့် စာပေမျိုး ရေးသားဖို့ရန် သိုမှီးသိမ်းဆည်းထားတဲ့ အသိပညာ ဗဟုသုတတွေ မပြည့်ဝသေးတာမို့ တစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုသော်မျှ ကျေနပ်ပျော်ရွှင် အသိပညာတိုးပွားစေလိုသော ဆန္ဒနဲ့ ဒီ blog လေးကို ဖန်တီးထားခြင်း မဟုတ်ရပါ...
ကျမ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့တဲ့ အာရုံ၊ အတွေး၊ ခံစားချက်၊ အချိန်လေးတွေကို အတူတကွရှိနေစေချင်ရုံ သက်သက်နဲ့ ဖန်တီးခဲ့ခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်...
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ကျမ blog ကို ရောက်ရှိခဲ့ပြီး စိတ်ကျေနပ်မှု တစ်စုံတစ်ရာ မပေးနိုင်ခဲ့သည်ရှိသော် ဝမ်းနည်းစွာနဲ့ပဲ "စိတ်မကောင်းပါဘူးရှင်"လို့ ပြောပါရစေ...
တကယ်လို့ ကျမကြိုးစားရေးခဲ့တဲ့ ကဗျာလေးတွေ၊ စာလေးတွေကို ကူးယူချင်တယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကလေးများရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်ဖြင့် ကျမရဲ့အားထုတ်မှုကို အသိအမှတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ ကျမနာမည်လေးကို ဖော်ပြပေးစေလိုပါတယ်... သို့ပေမယ့် ကျမရေးသားခဲ့သော ကျမ၏အကြောင်းအရာများကိုတော့ မကူးယူဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါရစေ...
ယနေ့ ကျရှုံးမှုတွေသည် မနက်ဖြန်၏ အောင်မြင်မှုများအတွက် လှေခါးထစ်များဖြစ်၏...
ဘဝဆိုတာ တိုက်ပွဲ... အရှုံးတော့ရှိမှာပဲ... ကိုယ်တိုင် ဒူးမထောက် လက်မမြှောက်ဖို့ပဲလိုတယ်...
ခင်ရင်ရေးပေး ကျွန်ုပ်အတွက် အားဆေး... (သူငယ်ချင်းတို့ကို သိရအောင် Link လေးတွေတော့ ထားခဲ့ပါနော်..)
2PM - Don't Stop Can't Stop (2010)
Copyright 2009 - k2tmaung